XOG: Madaxweyne Gaas oo safarkiisii Garoowe baajiyey & Dhacdadii maanta oo sababtay in uu dib u dhaco – Puntlandtimes
XOG: Madaxweyne Gaas oo safarkiisii Garoowe baajiyey & Dhacdadii maanta oo sababtay in uu dib u dhaco
Xoggo rasmi ah oo Warsidaha Puntlandtimes.com uu ka helay qaar kamid ah masuuliyiinta ka ag dhow madaxweynaha Puntland Dr. C/weli Maxamed Cali Gaas oo weli ku sugan deegaano kamid ah gobolka Sanaag oo safar dhanka dhulka ah uu ku marayo qaybo badan oo kamid ah ayaa waxaa dibu dhac ku yimid safarkii magaalada Garoowe oo qorshihiisu ahaa in uu maanta dib ugu soo noqdo magaalada Garoowe ee caasimada Puntland.
Dibu dhacan ku yimid safarkii madaxweyne Gaas ee magaalada Garoowe ayaa lagu sheegay in salka ku hayo xal u raadinta dhacdo naxdin leh oo maanta ka dhacday magaalada Hadaaftinimo ee gobolka Sanaag, kadib markii askari kamid ah ciidamada Daraawiishta Puntland uu rasaas ku furay gaadhi Xawaare sare ku socda oo uu watay alle ha u naxariistee Suldaan Xasan Cali Jirbiil, isagoona tacsi u diray madaxweyne Gaas qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay Suldaanku.
Madaxweyne Gaas ayaa ka codsaday waxgaradka Beesha Warsangeli in dhacdadaasi lagu dhameeyo qaab mulux ah oo ay kawada hadlaan waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka Beelaha walaalaha ah ee ay kasoo kala jeedaan Suldaanka dhintay iyo askariga dilka gaystay, waxaana sida la sheegay madaxweynuhu xooga saarayaa in uu xal rasmi ah ka keeno arintaasi si aysan colaad hor leh uga dhex dilaacin beelaha walaalaha ee dhacdadani dhex martay.
Arinta ugu badan ee wal walka ugu xoogan keenaysa ayaa ah in aysan ka faa’iidaysan dhibkaasi dhacay hor joogayaasha Somaliland ugu magacaaban gobolka Sanaag oo xooga saaraya haatan in colaad ka dhex hurinayaan Beelaha walaalaha ah, waxaana Mr. Gaas uu balanqaaday in uusan ka tagi doonin gobolka Sanaag ilaa uu ka xaliyo arimahaasi.
koley gacma jeegaaneed kama maqna dilkaas. waa ayagii ku hanjabay in ay ka jawaaabin imanshaha cabdiweli ee sanaag.
Ninka suldaanka dilay waa askari Ilaalada gaas ka mid ah,lkn jeegaanta waa soo dirsan kadhaan.
Waa in la baaraa oo la ogaado sababta uu u toogtay suldaanka oo ka qayb galay soo dhaweynta madaxweynaha.
Hadee waayahee ninkaan waa majeerteen baa la yiri ee sidee wax u jidhaan.
Ma ilaalada gaas baan lahayn khibrad ku filan oon waxba hubsan.
Abdiweli aniga dhanba waswaas baad Igu beertay ee ma iska hadlin,mase war xaqiiqo ah haysaa?.
Bal sharax sida jeegaanta ugu tuhmin shilkaa dhacay ee aan qarsooneen.
Waar ilaahay ka cabso oo beenta iska daa.